त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।। – List Khabar
Home / समाचार / त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।।
त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।।
admin December 4, 2021 समाचार Leaveacomment 49 Views
हरेक मध्येरातमा एक नम्बरबाट उनलार्ई मिसकल आइरहेको हुन्छ, तर कसको नम्बर होला भनी उनी फोन फर्काउँदैनन् बरु कसैको नम्बर झुक्किएर आयो होला भन्ने सोच्छन् । एक दिन होइन दुई दिन, तीन दिन लगातार मिसकल आइरहेको हुन्छ । सातौँ दिनको मध्यरातमा फेरि मिस कल आउँछ र उनकी छोरीले ‘बाबा हजुरको नम्बरमा मिलकल आइराछ’ भन्छिन्,
तर ‘कसैले झुक्किएर गरेको होला, छोड्देउ छोरी’ भन्छन् उनी । बाबा, छोरी, छोरा सबै सुत्छन् । सोही रात फेरि मिसकल आउँछ । ’अब त भएन है यसलार्ई थर्काउनु पऱ्यो भन्दै छोरी र छोराले फोन फर्काउन खोज्छन्, बाबाले फोन लिँदै ‘म कुरा गर्छु को रहेछ यति राति सधैं मिस कल गर्ने’ भन्छन् ।
Previous जापान जान प्रतिक्षारत आठ हजार नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित
Next बंगालमा ‘जवाद’ सामुन्द्रिक चक्रवात , नेपालमा असर